မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝဘေးကြောင့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေငါးသိန်းကျော် ဘေးဒုက္ခရောက်ခဲ - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃- မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝဘေး ကြောင့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေငါးသိန်းကျော် ဘေးဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ပြီး ကျပ်သန်းပေါင်း ၉၇ ၆ ဒသမ ၇၉ သန်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ က ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် နံ နက်ပိုင်းက နေပြည်တော် MICC-2တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝ ဘေးလျော့ပါးရေးနေ့ အထိမ်းအ မှတ်အခမ်းအနား အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန် ထီးယူက ”ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၂၅ဝဝ ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ ငါးသိန်း ကျော်ဟာ ဘေးဒုက္ခ ခံစားခဲ့ကြပါ တယ်။ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ကျပ်သန်း ပေါင်း ၉၇၆ ဒသမ ၇၉ ရှိခဲ့ပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဘေး ဖြစ်ပွားမှုများကို ထောက်ပံ့မှုများ အပြင် ရေရှည်သဘာဝဘေးလျော့ ပါးရေး အစီအမံများအတွက် ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၅၈၅ ကျော် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန် ထီးယူက ”သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည် တည်တံ့တဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အ ဟန့်အတား ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကစိန် ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘက် စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါး ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရာမှာ ဒီအ ချက်ကို အလေးအနက်ထား ထည့် သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ကြဖို့ မှာ ကြားလိုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် အာဆီယံဒေသ၏ စီးပွားရေးထိ ခိုက်မှုမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စာရင်း အင်းအချက်အလက်များအရ နှစ် စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသ မ ၄ ဘီလျံအထိရှိခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ ဂျီဒီပီ၏ ဝ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုနေတာတွေ့ ရှိရကြောင်း သိရသည်။
”ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် စီး ပွားရေးကဏ္ဍအပါအဝင် ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ စနစ် ကျသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ မူဘောင် များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆောင် ရွက်ရသလို လိုအပ်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်လည်း ဆောင် ရွက်ရတာဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံအနေနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် နည်းဥပဒေကိုရေး ဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘေးအန္တရာယ်စီမံ ခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အမျိုးသားသ ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ ခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှဦးဆောင်၍ တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့ နယ်အဆင့်အထိ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းကာ ဘေးဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ တယ်”ဟု ဒုတိယသမ္မတက ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား
နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် NCA-S EAOအကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
တရုတ်ဘက်မှ လုံခြုံရေးဖြေလျှော့မှု မရှိသေးသည့်အတွက် မူဆယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ရပ်တန့်နေရသည်မ?
‘သီချင်းတွေက စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ရောင်းစားမယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ယူဆိုမယ်။ ဒါက သိပ?
ဆရာ၊ ဆရာမများ အနေနှင့် မတူကွဲပြားမှုများကို အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိစေရန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်?